कस्तो नि’र्दयी संस्कार ! जहा युवतीको यो’नी, छे’दन गरिन्छ . . . – Ujyaalo Patrika
कस्तो नि’र्दयी संस्कार ! जहा युवतीको यो’नी, छे’दन गरिन्छ . . .
महिलाको यो* नि छे*दन गर्ने एक नि*र्दयी संस्कारलाई कानूनी रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएपनि अझै पनि विश्वका कतिपय देशहरुमा यो प्रचलन कायमै रहेको छ ।
उनीहरुले मेरो यो*नी तन्काएर केही चिज काटे । मलाई खपिनसक्नु पिडा भयो । ड, रले चिच्चाए । त्यसपछि उनीहरुले का टेको ठाँउमा केही कालो पाउडर छर्किदिए ।
तत्कालै मेरो पाइन्ट खोलियो,’ सो घटनाबारे उनी बेलिबिस्तार लगाउछिन्, ‘उनले मेरो हात समाईन भने अर्की महिलाले खुट्टा । त्यपछि उनीहरुले मेरो यो*नी तन्काएर केही चिज का,टे ।
मलाई खपिनसक्नु पि डा भयो । ड ,र ले चिच्चाए । त्यसपछि उनीहरुले का टेको ठाँउमा केही कालो पाउडर छर्किदिए । पाइन्ट लगाइदिए र हजुआमाले मलाई घर लगिन् । ’
यो घटना ठीक ४० वर्ष अगाडिको हो । सो घ,ट ना सम्झेर रानालभी झै पनि दुखित र लज्जाबोध हुन्छिन् । यसै महिना उनीलगायत अन्य पी,डि त महिला महिलाको गु*प्तां ग छे*दन (फिमेल जेनिटिय मल्टिलेसन अर्थात एमएमजी) बि रु*द्ध अभियानमा संलग्न भएकी छिन् ।
एफएमजी अन्र्तगत महिलाको यौ*न अंगलाई आशिक वा पूर्ण रुपमा छेदन गरिन्छ । का, *ट्नुको कुनै चिकित्सकीय कारण छैन् । रानालभीका अनुसार यो संस्कार पूर्ण रुपमा पितृसतात्मक सोचमा आधारित छ ।
यो*निच्छेद गरेपछि महिलाको यौ*न शक्ति घट्ने र बाहिर केटासँग बरालिंदै नहिड्ने तथा आफ्नो श्रीमानसँग मात्र भक्त भइन्छ भन्ने विश्वासमा यो कुसस्कारले जरा गाडेको उनको भनाई छ ।
छे*दनको कुनै चिकित्सकीय कारण छैन् । रानालभीका अनुसार यो संस्कार पूर्ण रुपमा पितृसतात्मक सोचमा आधारित छ । यो*निच्छेद गरेपछि महिलाको यौ*न शक्ति घट्ने र बाहिर केटासँग बरालिंदै नहिड्ने तथा आफ्नो श्रीमानसँग मात्र भक्त भइन्छ भन्ने विश्वासमा यो कुसस्कारले जरा गाडेको उनको भनाई छ
‘महिलाको यौ*न इच्छा नियन्त्रण गर्नु र उनलाई यौ*न कार्यमा कम आनन्ददायी बनाउनु यसको मुख्य उदेश्य हो,’ उनी भन्छिन् ।
कुनैबेला अफ्रिका र मध्येपूर्वका विभिन्न देशहरुमा एफएमजी गरिन्थ्यो । तर, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकामा भने यसलाई निकै गो*प्य रुपमा राखियो । यो प्रथा इन्डोनेसियामा अझै पनि विद्यमान रहेको बताइन्छ ।
सन् २०१२ को डिसेम्बरमा राष्ट्रसंघको साधारण सभाले एफजीएमलाई निर्मूल गर्ने एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । स्थानीय भाषामा यसलाई खाट्ना वा यो*निच्छेद बताइन्छ ।
‘एफजीएम अझै भित्र भित्रै गो*प्य रुपमा गरिन्छ,’ चेन्ज डट ओराजी की प्रिती हरमानले बीबीसीलाई भनिन् । ‘पहिलो पटक भारतका महिलाहरुले एफजीएमकाबि रु*द्धमा बोलेका छन् । सन्देश स्पष्ट छ–एफजीएमलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । ’ उनले भनिन् ।
कला इतिहासकार हाबिबा इनसाफ तथा सो समुदायकी सदस्य भन्छिन्, ‘यो प्रथा अझै पनि कोरियामा विद्यमान छ । हाम्रो समुदायका कोही पनि मानिसले यसको बारेमा नबोलेकोले यो, निच्छेदको कुप्रथा कायमै देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।
‘क्लिनिकल्ली निपूर्ण व्यक्तिले यो कार्य नगर्ने हुँदा विभिन्न समस्या आउने गरेका छ । एफजीएम गर्दा गर्र्दै कतिपय बालिकाको मृ*त्यु समेत भएको छ,’ इन्साफले भनिन् ।
एफजीएमले दीर्धकालिन अशर गर्ने बताइन्छ । यसले मनोवैज्ञानिक र यौ*नको दृष्टिले समेत हानी गर्ने विज्ञहरु बताउछन् ।
‘क्लिनिकल्ली निपूर्ण व्यक्तिले यो कार्य नगर्ने हुँदा विभिन्न समस्या आउने गरेका छ । एफजीएम गर्दा गर्र्दै कतिपय बालिकाको मृ*त्यु समेत भएको छ,’ इन्साफले भनिन् । केही वर्ष अगाडि बोहराको उच्च धार्मिक नेता साइड्ना मोहमद बुरहनुद्दिनलाई एफजीएम प्रतिबन्ध गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, सो लिखित आग्रहलाई डस्टबिनमा फालिएको उनी बताउँछिन् । ‘महिलाले हाम्रो धर्मलाई विना तर्क पालना गर्नपर्छ,’ सो समुदायका प्रवक्ता भन्छन् ।
कसरी गरिन्छ यो*निछे*दन ?
यो*नीछे*दन विधि विभिन्न जातीय समूहहरुबीच फरक फरक हुन्छ । जस्तैः यो*नीको भं*गा कुर पत्र र मुन्डलाई हटाइन्छ भने कुनै समुदायले यो*नी मुखको भित्रि भोगस्ठ (लेबिया) लाई हटाउछन् ।
मु*त्र निकास हुन र मासिक धर्मको समयमा अबरोध नहोस भनेर सानो द्वार राखिएको हुन्छ । स ह बा स र बच्चा जन्माउँदा यो*नी आफै खुल्ने बताइन्छ । यस पक्रियाले यो*नीमा सं*क्र मण, दीर्घकालिन पी*डा र बच्चा जन्माउदा समस्या हुने बताइन्छ । चिकित्सा विज्ञानमा अहिलेसम्म यसको कुनै फाइदा उल्लेख गरिएको छै्न
Previous छोरी मानेकी सपनाको गोप्य फोटो आफ्नो मोवाइलमा किन राखे विनयजंगले ? ‘देखाइदिउँ !’ भन्दै दिए चेतावनी (भिडियो हेर्नुस्)
Next वर्षौंपछि सलमान खानकी पूर्व प्रेमिका सार्वजनिक, विवाह गर्न अमेरिकाबाट मुम्बई